Maitiro ekugovana yako nzvimbo pane iOS | IPhone nhau
Maitiro ekugovana nzvimbo pane iOS
Vazhinji vedu, sekutonga kwakawanda, tine godo nekuvanzika kwedu, kana zvirinani zvinofanirwa kunge zvakadaro, kunyangwe tikashanyira masocial network tinogona kuona kuti hazvisizvo mune dzimwe nguva. Asi patinotaura nezve kwatinogara, zvinhu zvinogona kuchinja. PaFacebook neTwitter tinogona kuburitsa mifananidzo nenzvimbo yedu chero nguva yakapihwa, kana nzvimbo yacho ingave yakakodzera kune vateereri vedu.
Iyo nzvimbo pazvinhu zvakavakirwa paIOS inobatsira zvakanyanya kana tisingakwanise kuwana chishandiso chedu kana nekuti tazvirasa kana nekuti zvakabiwa. Muzviitiko zvese izvi tinogona shandisa iyo iCloud sevhisi, kuwana nzvimbo yeyedu kifaa kana nzvimbo yekupedzisira mudziyo wedu wakapfuudzwa usati wadzimwa kana kupera bhatiri.
Asi isu hatigone kuzvishandisa chete izvo. Mukati meiyo iOS kumisikidza (sekureba sekunge isu tine akati wandei michina) tinogona kugadzirisa nzvimbo yatinoda kugovana. Kupa muenzaniso kuitira kuti unzwisise: Ndinozviwana ndave ne iPhone yangu pamutambo wenhabvu asi ndaudza mukadzi wangu kuti ndiri kuhofisi. Kusimbisa ndinogona kukutumira iyo nzvimbo kwandinenge ndiri, asi mune ino kesi ini ndaizoshandisa iyo nzvimbo yeiyo iPad kuigovana.
Goverana nzvimbo pane iOS
Tinokwira kumusoro Zvirongwa.
Mukati Zvirongwa tinya pa Privacy, iri kumagumo kwetatu sarudzo block.
Iye zvino tinodzvanya pane yekutanga kuwanikwa sarudzo Nzvimbo. Kuti tiite izvi zvinofanirwa kuti zviitwe.
Mune inotevera menyu tinya pa Govana nzvimbo yangu uyezve mukati Kubva.
Chidzitiro chinotevera chinoratidza ese nhare mbozha dzatakabatanidza neakaundi yedu yeApple. Tinofanira chete sarudza chishandiso chatiri kuda kutumira nzvimbo kwatiri, chero bedzi isiri padyo nesu, zvikasadaro hazvina musoro kuita chiito ichi.
Iko mukana wekugovana nzvimbo yedu (kana tangoichinja) zvinogoneka chete nechishandiso Meseji uye Tsvaga Shamwari Dzangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugovana nzvimbo pane iOS
Iyi bhagi inokonzeresa kana uchinge wagamuchira imwe meseji pane iyo iPhone
Muiti wenhau, mabhuku mauri sarudzo dzako dzinogadzira nhoroondo